Vicente del Bosque oo kashifay in Nicolas Anelka uu sabab layaab leh tababarka Real Madrid ugu gooyay laba maalmood – muxuu tabanayay? – Gool FM
Vicente del Bosque oo kashifay in Nicolas Anelka uu sabab layaab leh tababarka Real Madrid ugu gooyay laba maalmood – muxuu tabanayay?
(Spain) 25 Maajo 2019. Tababarahii hore xulka Spain Vicente del Bosque ayaa kashifay in waqtigiisii Real Madrid uu goob joog u noqday sheeko xiiso leh oo ku saabsan Nicolas Anelka, xiddigii hore xulka France ayaana go’aansaday inuusan laba maalmood tababarka imaanin sabab jirta aawadeed.
Nicolas Anelka hal fasal ciyaareed ayuu kooxda caasimadda ku qaatay iyadoo uu tababare yahay del Bosque, balse Paris Saint Germain ayuu ku biiray sanadkii 2000.
Vicente del Bosque wuxuu ka sheekeynayaa wixii kalifay inuu Anelka tababarka imaan waayo laba maalmood iyo sida ay layaabka ugu noqotay.
“Anelka wuxuu ahaa xiddig noogu fadhiya lacag badan” ayuu yiri del Bosque oo wareysi xiiso leh siinayay channel-ka youtube-ka ah ee Idolos.
“Real Madrid waxey ka bixisay 5 Malyan oo Yuuro, waxeyna ula soo saxiixatay sida xiddig”
“Wuxuu yimid qolka labiska maalin, wuxuuna noo sheegay inaanan ku faraxsaneyn guulahiisa, maadaama aan lagula dabaal dagin goolkiisa, maalin iyo laba maalmood tababarka ma imaan, kooxda ayaana ganaax ku riday” ayuu mar kale yiri macalinka reer Spain.
Anelka wuxuu ka mid ahaa ciyaartoydii ugu magaca weyneed ee kooxda Madrid ka tirsanaa waqtigaas, waxeyna aheyd xilligii ugu horreeyay uu saxiixyada Glaticada ka hirgaliyo Perez kooxda.
“Waxey u tababaranayeen si caadi ah oo dhameystiran, isagoo kooxda ka maqan”
“Ma aheyn nuuca dadka ee ciyaartoyda ka careysiiya, taxadar iyo dulqaad ayaan u muujinay, balse mar walba waa inaan su’aalo weydiinaa, waa inaad dulqaad sameysaa balse waxaan u baahneyn isla waqtigaas”
Heshiiska uu Eden Hazard ugu biirayo Real Madrid oo waqti loo qabtay & labada kooxood oo lacaga isku khilaafsan.